Dalabka kaarka aqoonsiga oo cirka isku shareeray | Somaliska
Ka dib markii la fasaxay sameysashada kaarka aqoonsiga 1dii bishii Oktoobar ayaa Laanta Canshuuraha ee Sweden (Skatteverket) ay bixisay 10,000 oo kaarar aqoonsi cusub. Skatteverket ayaa sheegtay in hada ay adeegsanayaan teknolojiyo cusub oo u suurto galineysa in ay qofka baaritaan ku sameeyaan ayagoon si shaqsi ah ula xiriin Laanta Socdaalka. Nidaamkaan cusub ayaa la filayaa in uu aad u fududeeyo waqtiga hada ay qaadato in la sugo soo saarita kaarka. Wixii ka horeeyay 1da bisha Oktoobar ayay qasab ku ahayd dadka soo galootiga ah in ay la socdaan gacanyare si loogu sameeyo Kaarka Aqoonsiga balse hada ayaa arintaas la joojiyay oo Laanta Canshuuraha ay warbixintaada ka helaysaa Laanta Socdaalka (Migrationsverket).
Ka dib markii la fasaxay sameysashada kaarka aqoonsiga 1dii bishii Oktoobar ayaa Laanta Canshuuraha ee Sweden (Skatteverket) ay bixisay 10,000 oo kaarar aqoonsi cusub. Skatteverket ayaa sheegtay in hada ay adeegsanayaan teknolojiyo cusub oo u suurto galineysa in ay qofka baaritaan ku sameeyaan ayagoon si shaqsi ah ula xiriin Laanta Socdaalka.
Nidaamkaan cusub ayaa la filayaa in uu aad u fududeeyo waqtiga hada ay qaadato in la sugo soo saarita kaarka.
Wixii ka horeeyay 1da bisha Oktoobar ayay qasab ku ahayd dadka soo galootiga ah in ay la socdaan gacanyare si loogu sameeyo Kaarka Aqoonsiga balse hada ayaa arintaas la joojiyay oo Laanta Canshuuraha ay warbixintaada ka helaysaa Laanta Socdaalka (Migrationsverket).
Qoob ka ciyaar & Quraanka